Ukutsalela umnxeba iYurophu eSpain ngoku kubiza ixabiso eliphantsi | I-Androidsis
UEder Ferreño | | Izaziso, Abasebenza ngefowuni
Kwiminyaka embalwa edlulileyo ukuzulazula kudlule kwi-European Union. Inyathelo lokuqala elibalulekileyo kubathengi. Nangona iYurophu izibekele injongo yokunciphisa iindleko zeefowuni phakathi kwamazwe akwiManyano. Into esele iyinyani ngoku ngamanyathelo amatsha asele esebenzile. Ukususela ngoku ukuya phambili, Ukufowuna usuka eSpain uye kwamanye amazwe e-EU sele kungabizi kakhulu.
Kungenxa yoko, bonke abaqhubi eYurophu ngoku kufuneka bahlengahlengise amaxabiso abo. Ke amaxabiso eefowuni zamanye amazwe zabantu ngabanye ayabiza. Ukusukela nge-15 kaMeyi, la maxabiso matsha sele esebenza, ziisenti ezingama-23 ngomzuzu, ngeefowuni. Ngelixa i-SMS ihlala kwiisenti ezisi-7 ngomyalezo obhaliweyo.
Olu tshintsho luzisiweyo luzenzekelayo, ke umsebenzisi akunyanzelekanga ukuba enze nantoni na ukuze ayifumane eli xabiso litsha. Nangona umqhubi enyanzelekile ukuba azise umsebenzisi malunga nolu tshintsho lwamaxabiso. Ngesi sizathu, umyalezo sele ufunyenwe okanye uya kuthunyelwa usazisa malunga nala manqanaba matsha eYurophu. Ukongeza, ezi ntlawulo zintsha kulindeleke ukuba zihambelane nezinye izibonelelo ezibonelelwa ngabaqhubi.
Ayisiwo kuphela amazwe akwi-European Union axhamlayo kolu tshintsho. Amanye amazwe, anezivumelwano ezahlukeneyo zoqoqosho kunye ne-EU, okanye ezikwi-European Community Community, nazo zibandakanyiwe, cinga ngamanye anjenge-Iceland okanye iNorway. Uluhlu olupheleleyo lwamazwe lulandelayo: iJamani, iOstriya, iBelgium, iBulgaria, iSipro, iCroatia, iDenmark, iSlovakia, iSlovenia, i-Estonia, iFinland (kubandakanya iAland Islands), iFrance (kubandakanya neMartinique, iGuadeloupe, iStart Martin, iFrench Guiana. , Reunion kunye neMayotte), iGrisi, iHungary, iIreland, iIceland, iItali, iLatvia, iLiechtenstein, iLithuania, iLuxembourg, iMalta, iNorway, iNetherlands, iPoland, iPortugal (kunye neMadeira kunye neAzores), eUnited Kingdom (kubandakanya iGibraltar), kwiRiphabliki Czech , ERomania naseSweden.
Kwimeko yeSpain, abona baqhubi baphambili sele babhengezile amaxabiso amatsha esebenzayo ukususela ngoku. Ke abasebenzisi sele besazi ukuba baya kuhlawula malini xa besenza umnxeba kwamanye amazwe aseYurophu. Ngaphandle kwamathandabuzo, ngumzuzu obalulekileyo, ngakumbi ngoku ekubeni ihlobo lisondela kwaye abantu abaninzi baya kuhambo, ukuze bakwazi ukunxibelelana nabahlobo babo okanye nosapho ngendlela elula.
Amaxabiso abaqhubi baseSpain
E-Spain sifumana abaqhubi abaphambili okanye amaqela, abonisa amaxabiso afanayo kwiimeko ezininzi. Ahlengahlengiswa ngalo lonke ixesha kula maxabiso matsha ekufuneka esetyenziswe eYurophu. Kwimeko yeSMS, kusenokwenzeka ukuba uya kuwabona amaxabiso eesenti ezingama-7,26, kungenxa yokuba kwezi meko iVAT sele ibandakanyiwe kwixabiso. Ukusukela ubuninzi obumiselwe yi-EU abuyibandakanyi iVAT (kwezi 7 senti sibonileyo ngaphambili). Nantsi iirhafu ezintsha:
IGupoo Movistar (ikwayi-O2, iSimyo)Iisenti ezingama-22 zokusekwa kweefowuni. Umzuzu wokuqala uxabisa nge-1c kunye ne-23 yeesenti ngomzuzu wokutsalela umnxeba. Imiyalezo ebhaliweyo engama-7,26 eesenti ngeSMS nganye.
inthanethiIisenti ezingama-21 zokusekwa kweefowuni. Isenti enye ngomzuzu wokuqala kunye neesenti ezingama-1 ngomzuzu wentsalela yomnxeba. Imiyalezo iisenti ezisixhenxe kwiSMS nganye.
LowiUkusekwa kweefowuni simahla kunye neesenti ezingama-20 ngomzuzu kuwo wonke umnxeba. Imiyalezo inexabiso leesenti ezisixhenxe ngeSMS nganye.
Iorenji, iYoigo, iJazztel, iAmena, iRepública Móvil kunye neMasMóvil: 23 iisenti zokusekwa kweefowuni. Umzuzu wokuqala simahla (0 iisenti umzuzu wokuqala) kunye neesenti ezingama-23 ngomzuzu wokutsalela umnxeba. Kwimeko yemiyalezo eyi-7,26 iisenti nge-SMS nganye.
IGoogle Fi: Umsebenzi kaGoogle ulungiselela ukungena eYurophu
La ngamaxabiso amatsha esikuwo ngoku eYurophu. Ke ukuba ufowunela abahlobo okanye usapho oluhlala okanye oluhamba kwelinye ilizwe kwilizwekazi, ungaqaphela ukuba ezi fowuni ngoku zitshiphu. Ucinga ntoni ngala maxabiso matsha?
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Ukufowuna ukusuka eSpain ukuya eYurophu kungabizi kakhulu
I-Realme X: Iphrimiyamu entsha yohlobo lwebhrendi